Ulusu oluKhawulezayo oluKhawulezayo lwe-UV eVuthayo yokuPhefumla i-Mens Iziqu zokudada
I-85% yePolyester + 15% iSpandex, Ukuhlamba umatshini;
2 Iipokotho ezisecaleni zezinto zakho eziyimfuneko, ayizukuxhamla ukukhusela amaqhosha / ifowuni / iigel, uyilo olukhuselekileyo lwepokotho lukhuselekile ukukhusela izinto ekuweleni phantsi kwazo naziphi na iimeko;
Uku-odola ubungakanani be-1 ezantsi ukuba ukhetha ukunyanzeliswa kokulingana, ukuvalwa kwe-Elastic;
Ukunyanzelwa kwezemidlalo iithayile ezimfutshane zenziwe ngelaphu le-elasticity elomeleleyo elonyusa uluhlu lokuhamba kunye nentuthuzelo enkulu kunye nobunzima;
Uyilo lolusu oluhlala ixesha elide. I-Flatlock seams yongeza ukuthamba kunye nokukhuseleka ngaphandle kokukhathaza ulusu kunye nokucaphuka;
Ukuthuthuzela kufanelekile. Iileta zefashoni zelinki yebhanti zikhululekile kwaye zichasene nokutyibilika, ezi mfutshane ziqinileyo zinokuphelisa ukudinwa kwezihlunu kwaye zikugcine ukwimeko entle yokuqhubeka nokuzilolonga, upholile womile kwaye uyaphefumla;
I-Athletic Compression Shorts ikhusela ulusu lwakho elangeni, hlala upholile kwaye womile;
Umsebenzi omfutshane omfutshane wokubaleka, uqeqesho, umthambo, ukuhamba ngebhayisikile njalo njalo. Ukuba ufuna ukufumana uxinzelelo ngakumbi kulusu oluqinileyo, nceda u-odole ubungakanani be-1 ezantsi kunokuba uqhele ukunxiba.
Ndithengele bonke abo badadayo besikolo samabanga aphakamileyo izibini zezi mfutshane. Zilingana kancinci kancinci kunokuba bekulindelwe kwaye zihlala zinikezela ngokutsala emanzini. Zikulungele ukuqeqeshwa, kodwa azikhuthazwa ukhuphiswano. Umgangatho olungileyo kwaye usasebenza injongo, ke ndiyinike iinkwenkwezi ezi-5.
Egqithileyo Ukuvalwa kweepaneli zecala Elastic Ukuvalwa kwe-29.5 ″ -45.3, Isuti yokuhlamba yamadoda
Okulandelayo: Ihlobo ngokukhawuleza ukomisa i-Spandex / i-Nylon yokuDada kwamadoda kwiBhangi